Kenya oo rajo ka qabta in mareykanka uu ku soo wareejiyo diyaarado Dagaal.
Dowlada dalka Kenya ayaa sheegtay in ay rajo weyn ka qabto codsi wasaarada arimaha dibad bada ay u dirtay dalka mareykanka kaa oo ay kaga dalbatay diyaaradaha dagaalka si ay kula dagaalamaaan xarakada al shabaab ee soomaaliya iyo Kenya ka dagaalamta.
Wasiirada arimaha dibada dalka Kenya Amina Mohemed oo magaalada Washintogton ee dalka mareykanka ku sugneyd ayaa ka codsatay hergelinta codsigooda si dib u dhac uusan ugu iman dagaalka ay kula jiraan xarakada al shaabab.
Waxaa sidoo kale wasiirada arimaha dibada dalka Kenya ay sheegtay in ay la kulantay Senator Bob Carker oo ah gudoomiyaha guddiga sanadka arimaha dibad ee dalka mareyknaka iyo ku xigeenka xoghayaha dalka mareykan Mr Tom Shananon oo ay sheegtay in ay kala hadashay sidii dowlada Kenya looga taageeri lahaa ladagaalanka xarakada al shabaab.
“Dowlada Kenya waxa ay la wadaagaty dalka mareykanka arimo quseena amaanka geeska Africa oo soomaaliya ay kamid atahay iyo arimaha nabada koofurta sudan” ayeey Tiri Aamina Mohamed.